घरबाट निस्किन्दै गर्दा आमासँग अंगोलामा बेरिँदै यस्तो आशंका ब्यक्त गरेकी रहिछन् भागीरथिले हेर्नुहोस् पूरा भडियो – Charchit Entertainment
घरको दैलोमा बस्दै बाटोतिर एकोहोरो हेरी रहेकी यी आमा । जस्को ओँठमुख सबै सुकेका छन् । यिनलाई न दिनको भोक छ न त रातको निंद नै छ छ त केवल आफ्नै जिन्दगीको सहनै नसक्ने पि’डा । यिनी हुन् स्कूलबाट अहिलेकी चर्चित दुखद घटनाकी पात्र भागरथीकी आमा । जस्को आखाँबाट बर्रर आँशु झरि रहेको छ तर पुच्छ्ने हेक्का भने छैन पि’डामाथि पि’डा सहुन् पनि कसरी ? श्रीमानको मृत्यु भएको २ महिना पनि पुरा भएको थिएन । फेरी जवान र होनहार छोरी गईन् अल्पआयुमै ।यी एकल आमाको काख र कोखबाट खोसिदिए पापीहरुले । सन्तानलाई सानो चो’ट मात्रै लाग्दा त त्यसको दुखाई आमाबुवालाई हुन्छ भने भागरथी त अकाल्मै यो संसारबाटै आफ्नी आमालाई सदाकालागी छाडेर गएकी छन् ।
छोरी अब यो संसारमा कहिल्यै नर्फकने गरी गएको खबरले यी आमाको मन दुखेको छ होला ? कति छ’टपटि’एको छ होला ? यो कुराको अनुभुति केवल उनैले मात्र गर्न सकेकी छन् ।छोरी अझैंपनि कतैबाट आमाभन्दै बोलाउँदै आउँछे कि भन्ने उनलाई कति लागेको हुँदो हो । तर अब त्यो कहाँ सम्भव छ र ? दैव पनि कति निष्ठुरी हुँदा रहेछन् भन्ने भनाई यतिबेला भागरथीकी आमाको जीवनमा लागु भई दिएको छ ।
बहीनी भागरथीलाई सम्झंदै रसाएका दाईका आखाँले बहीनी गुमाउँदा उनको मनमा फु’टेको ज्वारभाटालाई प्रष्ट देखाउँछ । बुवाको निधनपछि घरको जिम्मेवारी उनीमाथी आई लागेको हुनाले काम गर्न र आर्थिक कुरालाई माथि उठाउन उनी भारत गएका थिए ।
झापामा २२ वर्षकी बुहारी माथि ५९ वर्षका ससुराको घृ णी त काम, श्रीमानले पनि ससुराकै कोठामा धकेलेर पठाउँथे (भिडियो
August 14, 2021 August 18, 2021 Auther
श्रीमान विदेशवाट आएको २ दिनमै श्रीमती भागीन्, साना छोराहरु भन्छन् अंकलहरु घरमा आउँदा हामीलाई बाहिर लखट्नुहुन्थ्यो (भिडियो